Khulisa amazambane akho - Umagazini Wamazambane
Meyi 27, 08:00
в Izindaba zesifunda, Ezomnotho nokuhlaziya
Kuzo zonke izinhlangothi, inhloko-dolobha yaseKomi yayizungezwe izindlu zezwe, futhi iningi lezakhamizi zisebenzisa lo mhlaba ngezinhloso zawo - zikhulisa imifino namazambane lapho. Abahleli be-BNK banqume ukubala ukuthi yini eshibhile - thenga amazambane esitolo noma ukhule ezweni.
Phakathi kwezimpikiswano eziphambili zabahlali basehlobo - amazambane abo uqobo anqabile. Akekho ophikisana nalokhu - othengi uhlala emubi ngandlela thile. Enye impikiswano - umsebenzi wakho awubhekwanga, leli qiniso elingathandeki livame ukuzwakala kubamele besizukulwane esidala. Futhi abalimi bacishe bangabaze ukuthi isivuno sibiza malini ngempela. Sinqume ukubenzela bona. Masinyane yenza ukubhuka kokuthi zonke izibalo ziyaphikisana kakhulu. Kepha umhlali ngamunye wasehlobo angakwazi, ngokwesibonelo, ukubala izindleko ezijwayelekile zekilo yamazambane, kulandela uhlelo lwethu.
Ukuze sibalwe, sathatha uzungu lwezingxenye ezingamakhulu amabili.
Amazambane atshalwe ngasekupheleni kukaMeyi - ekuqaleni kukaJuni, ukukha - kuze kube maphakathi no-Septhemba. Okusho ukuthi, udinga ukubonakala ekotishi okungenani izinyanga ezinhlanu ukulungiselela isiza, tshala amazambane, ukhula, udoti, ehlobo elishisayo, mhlawumbe futhi uzothambisa izikhathi ezimbalwa, uqoqe amabhungane eColorado, unqume ama-inflorescence (ezinye izakhamuzi zasehlobo zicabanga ukuthi lokhu kwandisa isivuno) . Ake sithi konke lokhu kungenziwa kohambo oluyishumi.
Uma uhamba ngebhasi, kuzodingeka ukhokhe kusuka 480 ukuze 600 ama-ruble (kuya ngomzila, intengo yamathikithi nezaphulelo). Kufanele futhi kubhekwe ukuthi amazambane embewu kuzodingeka ahanjiswe endaweni ethile - kungaba ngokubuza izihlobo noma abantu obajwayele, noma aqashe imoto. Sizoyibeka 200 ama-rubleyize inani lingaphakama kakhulu.
Imoto izobiza ngaphezulu. Ngokuya ebangeni, izindleko zizoba cishe 1000 ama-rubleuma isigodlo siseduzane nedolobha, futhi Ama-ruble angu-4000 nokuphakama uma kufanele uhambele kude, ngokwesibonelo, ukusuka e-Orbit kuya e-Myrty-u.
Ngekhulu lapho udinga cishe amakhilogremu ayi-100-200 womquba obolile noma udoti (abanye bancoma ukungeza abangama-300). Vele, lo manyolo awuthengiswa ngamakhilogremu - kufanele u-oda iloli. Konke kuzodla inani elibalulekile, izindleko zingafinyelela Ama-ruble angu-4000 futhi nokuningi. Kuyacaca ukuthi akuwona wonke umquba, udoti noma udoti ozongena ngaphansi kwezambane, ngakho-ke, ake sithi umhlaba uzongcwatshwa kusuka Ama-ruble ayi-1000 kuye kwangama-1500.
Kulokhu sidinga ukufaka umquba ohlukahlukene, izithasiselo zokukhula, amakhambi wezifo nezinambuzane - Ama-ruble angu-500.
Vele, kuhlala kunethuba lokuthola abantu abalungele ukulima insimu ngamabhodlela ama-vodka ambalwa (izindleko zizoba cishe Ama-ruble angu-300). Amakhosi ochwepheshe (futhi kukhona abanye kule ndawo) abuza okuningi - intengo angakhuphukela kuyo Ama-ruble angu-1000 ngamamitha skwele ayikhulu (nama-ruble angama-2000 amabili). Izindawo zokumemezela zigcwele imiyalezo yokulima umhlaba ngogandaganda omncane, umgandaganda wokuhamba ngemuva komlimi. Intengo icishe ifane - ama-ruble angama-700-800 ngamamitha skwele ayikhulu, okungukuthi 1400-1600 ruble izingxenye ezingamakhulu amabili.
Izakhamizi eziningi zasehlobo zenza konke zodwa, zikholelwa ukuthi umsebenzi wazo awuhumushi zibe yimali nhlobo. Sizokwenzela bona. Nasi isikhathi esingakanani okufanele usisebenzise:
- ukulima - amahora angu-8;
- ukufika - amahora ama-4;
- Ukhula - amahora angama-8;
- hilling - amahora ayi-6;
- Ukuvuna - amahora angu-8.
Sekudlule amahora angama-34. Kepha lapha ungangeza amanye amahora angama-8 wokunisela, ukuqoqa izimbungulu, ukhula okwengeziwe. Ngaphezu kwalokho, akuyena wonke umuntu osebenza ngokushesha, ngakho-ke sizocabanga ngephutha lazo zonke izinhlobo zomsebenzi ngamahora angu-8. Silandisa amahora okusebenzela imali. Umholo ojwayelekile eSytytykkar kwezomnotho ngokuya ngemininingwane yakamuva evela kuKominat ngama-ruble ayizinkulungwane ezingama-52 ngenyanga. Ngenyanga - amahora we-160 wokusebenza. Okusho ukuthi, izindleko ezimaphakathi zomhlali wedolobha ngama-ruble angama-325 ngehora. Siphindaphindeka ngesikhathi esisetshenzisiwe futhi sithola ukuthi ukunakekela amazambane kubiza abahlala ehlobo 11050 ukuze Ama-ruble angu-16250.
Abalimi bayala ukuvuselela amazambane njalo ngonyaka. Ngokuya ngezinhlobonhlobo, ikhilogremu yokutshala ibiza kusuka kuma-ruble angama-90 kuye kwangama-160. Uma uthatha amakhilogremu amathathu, khona-ke izindleko zizoqhamuka 270 ukuze Ama-ruble angu-480.
Ukulima, ukufaka i-hilling nokuvuna kuwumsebenzi onzima, futhi akuwona wonke umuntu ongakubekezelela kalula. Ngakho-ke, kubalulekile ukuhlinzekela izindleko zokugcoba okufudumele, ama-painkillers neminye imithi ukuze kubuyelwe impilo. Ake sithi kufanele uyisebenzise 200 ukuze Ama-ruble angu-500.
Ngokunokwenzeka, amafosholo, ama-rakes, ama-chopper kanye nama-hoes sekuvele atholakala. Kepha uzodinga, ngokwesibonelo, amagilavu. Kubeke konke Ama-ruble angu-100.
U-Komi wabelwa insimu yezolimo enobungozi: Ihlobo elomile nelishisayo lingashintshwa yimvula futhi kubanda, kwesinye isikhathi iqhwa likhona ngisho ekuqaleni kukaJulayi. Ngakho-ke, isivuno samazambane esifundeni singasukela ku-180 kuya ku-70 centers ngehektha ngalinye. Ngokusekelwe kudatha yesikhathi eside yeKomistat, isivuno samazambane esivamile republic singama-120 centres ngehektha elilodwa, okuwukuthi, amakhilogremu ayi-12000 ngehektare eyi-100, isb.
Uma uyithatha kancane (gibela ibhasi, uthenge umquba, wenze konke ngokwakho futhi ungachithi imali kokuthile okungeziwe), khona-ke izindleko zizoba ngama-ruble ayizinkulungwane eziyi-12,5. Ngakho-ke, ikhilogremu eyodwa yamazambane ayo amnandi izodla umhlali wasehlobo phakathi I-52 ruble. Uma usebenzisa imoto, khona-ke "izindleko" zamazambane zanda ngama-ruble ayi-2-15 ngekhilogremu.
Uma ungagcini (shayela imoto, uthenge amazambane wembewu, umquba, umanyolo, amathuluzi, imithi), khona-ke izindleko zizoba ngama-ruble ayizinkulungwane ezingama-21,8, futhi intengo yekhilogremu elilodwa yamazambane icishe 91 ruble.
Manje eSytytykkar sigcina ikhilogremu yamazambane ashibhile kakhulu Ama-ruble angu-26. Izindleko zakwamanye amazwe (ezivela eAzerbaijan) I-72 ruble. Intengo ephakathi isuka kuma-ruble angama-36 kuye kwangama-45. Ekwindla, lapho kunemifino ethe xaxa, ungathola amazambane ezitolo Ama-ruble angu-20 ngekhilogremu.
Tags: izindleko zamazambane akhulayoI-Syktyvkar